कोरोनाले थलिएको भारतका ११ राज्यमा बर्डफ्लु फैलियो, नेपाल पनि उच्च जोखिममा ! – Himalitimes
कोरोनाले थलिएको भारतका ११ राज्यमा बर्डफ्लु फैलियो, नेपाल पनि उच्च जोखिममा !
२०७७ माघ ४ ०५:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौ । कोरोना भाइरसले थलिएको भारतका ११ राज्यमा बर्डफ्लु (एचफाइभ एनवान)को संक्रमणले डरलाग्दो रुप लिएको छ ।
भारतीय समाचार माध्यमले जनाएअनुसार भारतका केरला,राजस्थान,मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड र छत्तीसगढ़सहित ११ राज्यमा बर्डफ्लु फैलिएको पुष्टि भएको हो ।
यहाँका हजारौं जंगली पंक्षी, काग, बोइलर कुखुरा र हाँसमा फ्लु देखिएको हो । हरियाणाका पोल्टी फार्ममा केही दिनयता एकलाख भन्दा बढी हाँस र कुखुराको मरेको जनाइएको छ । फ्लु को समस्या देखिएपछि यहाँका किसानले व्यवसायीक रुपले पालेका बोइलर कुखुरा धमाधम मार्न थालेका छ्न ।
भारतका विभिन्न राज्यमा अहिले लक्षणसहित र लक्षण विहिनको बर्डफ्लु भेटिएको समाचार सस्था अमर उजालाले जनाएको छ । यहाँ अन्डा उत्पादन शक्ति कम हुने कुखुरा र हाँसमा लक्षणविहिन बर्डफ्लु भेटिएको बताइएको छ । पंक्षीविज्ञहरु जंगली पंक्षी र हाँसको कारण इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण व्यापक हुने बताएका छ्न । लक्षण नदेखिएका केही पंक्षी उडेर एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा जाने र उनीहरुको दिशामा समेत भाइरस भेटिने बताइएको छ ।
सिजनअनुसार बसाइ सर्ने चराहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उडेर जाँदा भाइरसको प्रसारण व्यापक हुने गरेको उल्लेख छ ।
भारतको छत्तीसगढ़मा रहेको गिधाली पोल्ट्री फार्ममा १० हजार बढी कुखुरा नस्ट पारिएको छ भने पन्जावमा पनि फ्लूको पुष्टि भएको छ । हिमाचलमा अहिलेसम्म ४ हजार ८ सय ७४ विदेशी पक्षिको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यता मध्य प्रदेशका २७ जिल्लामा फ्लूको संक्रमण फैलिएको बताइएको छ । भने राजस्थानका १६ जिल्लामा पनि बर्डफ्लु को संक्रमण भेटिएको पाइएको छ ।
नेपालमा बढ्यो जोखिम ?के छ सरकारको तयारी ?
भारतसग खुल्ला सिमाना रहेको नेपालमा यो रोगको उच्च जोखिम बढेको छ । सरकारले बर्डफ्लु रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पूर्वतयारी थालिएको बताएको छ ।
हरेकजसो हिउँदमा नेपालमा पशुपंक्षीलाई लाग्ने बर्डफ्लु रोगको प्रकोप देखिदै आएको छ । नेपालका लागि आयातित रोग भएपनि विगत १० वर्षदेखि किसानहरुले यसको दुःख भोग्दै आएका छन् ।
केहीदिन अघि छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा बर्डफ्लु देखिन थालेको छ । छिमेकी मुलुकमा देखिएसँगै नेपाल सरकारले यसको पूर्वतयारी थालिसकेको छ ।
लोकसेवा आयोगमा सोधिने खेलकुद सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रश्नउत्तरहरु हेर्नुहोस